UMark Ferrari ligcisa le-pixel kwaye uyayibonisa kule vidiyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-retro kunye ne-pixelated ubuyele kuthi ngamandla amakhulu Ngenxa yesidingo semidlalo yevidiyo yezixhobo eziselfowuni kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS, apho kukho imfuneko yokubonelela ngomgangatho obonakalayo omkhulu, kodwa ngaphandle kokubandakanya ukusetyenziswa kakhulu kwebhetri.
Kweso sidingo se bazi ezona zixhobo zibalaseleyo Ukwenza olu hlobo lobugcisa be-pixelated, ngamanye amaxesha sinokubhideka ukuqonda ukuba akukho mfuneko yokuba udlule kwi-Photoshop ukuvelisa isitayile esibonakalayo se-retro sineziphumo ezihle, kodwa kunokuba lula ukwenza, njengoko uMark Ferrari echaza kule vidiyo .
UFerrari ucacisa ezinye zeendlela zakhe zokuzoba imizobo engama-8 kuyo ibizwa njenge «8 bitish». Kule demo ukwabonisa ezinye zeendlela zakhe ezithandwayo zokusebenzisa ibhayisikile yombala kunye nokushenxiswa kwephalethi ukwenza intsingiselo enzima kunye neyoqobo yeefilimu ngaphandle kokuhamba ngesakhelo-ngesakhelo sopopayi.
Kwakhona xa ethatha umgangatho ukunika ingxelo ngomnye wemisebenzi yakhe yamva nje kumdlalo we umdlalo weRetro Thimbleweed Park nguRon Gilbert. Sebenzisa i-Photoshop ukubonisa ezinye iindlela kunye nokuba zingaphi izixhobo ezinokuthi zichaze isitayile sazo xa kufikwa kubugcisa be-pixelated art.
Ikhonkco kwividiyo iyafana le kwaye ungaya nakwesiphi na esona sihloko sibalulekileyo ngokufanayo kwizinto ezikhethiweyo ngasekhohlo njengokuqala kwenkqubo ukusuka kolunye ulwenziwo lokuqala kwi "templates". UFerrari wenza uphononongo olufanelekileyo kwividiyo ukuze ufaneleke uthathe inxaxheba kwi-retro yethu yomsebenzi ngoku iyathandwa kwizixhobo eziphathwayo.
Unyango olukhethekileyo olubonakalayo apho uFerrari yingcali kwaye akukho mntu ulunge ngaphezu kwakhe wokungena kulo mbandela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » UMark Ferrari ucacisa kwividiyo ye-8bit ubuchule bokuzoba kwimizobo ye-retro